Aasiya iyo Baasifigga ALinks
Maqaallada ku saabsan Aasiya iyo Baasifigga
Dhirta Dhiirrigelinta Ogsijiin si kor loogu qaado heerka oksijiinta si dabiici ah
Waxaa laga yaabaa 10, 2021 Maitri Jha Hindiya, wax in la sameeyo, waxyaabo waxtar leh
Ma waxaad raadineysaa hab dabiici ah oo aad ku kordhiso qadarka oksijiinta gurigaaga ku jirta? Photosynthesis oo ay dhirtu ku sii deyso oksijiin inta lagu jiro iftiinka dabiiciga awgood. Habeenkii, dhirtu waxay ku neefsataa oksijiin waxayna soo saartaa kaarboon
Cadayga korontada ugu fiican Hindiya
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 Maitri Jha Hindiya, waxyaabo waxtar leh
In kasta oo burush dhaqameedyada gacanta lagu sameeyo ay shaqo fiican ka qabtaan nadiifinta ilkahaaga. Marka maxaad ugu baahan tahay burushka cadayga korontada si aad u nadiifiso ilkahaaga? Cadayga korontada ku shaqeeya ayaa ka waxtar badan oo dhammaystiran. Burushka cadayga korontada ayaa kaa caawin doona inaad ka soo saarto ilaa
Sidee shaqo looga helaa Qatar? Tilmaam deg deg ah oo loogu talagalay ajaanibta iyo dadka reer Qatar
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 alinks shaqo, Qadar
Qof kasta oo doonaya inuu shaqo ka helo Qatar wuxuu u baahan yahay marka hore inuu shaqo ka helo Qatar. Ka dibna waxay heli karaan sharci degenaansho haddii ay mid u baahdaan. Tan oo dhan waxaa laga sameyn karaa dibedda ama Qatar. Ee
Daboolka Samsung Phone ugu fiican
April 22, 2021 Antika Kumari Hindiya, waxyaabo waxtar leh
U wareegida taleefanka casriga ah waa mid xiiso leh, laakiin u wareejinta nidaamka deegaanka ee cusub ayaa xitaa ka sii badan. Dad badan, taasi waa cabsi cabsi leh. Waxaa jira diidmo ah in la beddelo maxaa yeelay aaladaha moobiilku waxay noqdeen qayb muhiim ah
1 2 3 ... 22 Xogta ku xiga»